Muxuu Yahay Mustaqbalka Xog Uruurinta Dadban? | Martech Zone
Muxuu Yahay Mustaqbalka Xog Uruurinta Dadban?
Talaado, Nofeembar 3, 2015 Arbacada, Nofeembar 4, 2015 Douglas Karr
In kasta oo macaamiisha iyo alaab-qeybiyeyaashu ay si isku mid ah u sheegaan ururinta xogta dadban maaddaama ay tahay ilo sii kordhaya ee aragtida macaamiisha, qiyaas ahaan saddex-meelood laba meelood ayaa sheegaya inaysan isticmaali doonin xogta xaddidan laba sano kadib Raadinta waxay ka timid cilmi baaris cusub oo ay sameeyeen GfK iyo Machadka Cilmi-baarista Caalamiga ah (IIR) oo ka mid ah in ka badan 700 macaamiisha cilmi-baarista suuqa iyo alaab-qeybiyeyaasha.
Waa maxay Aruurinta Xogta Dadban?
Uruurinta xogta dadban waa soo uruurinta xogta macaamiisha iyadoo loo marayo hab dhaqankooda iyo isdhexgalka iyaga oo aan si firfircoon u ogeysiin ama u weydiinin rukhsadda macaamiisha. Xaqiiqdii, macaamiisha badankood xitaa ma ogaadaan inta xogta dhabta ah ee la qabtay, ama sida loo adeegsado ama loo wadaago.
Tusaalooyinka xog ururinta dadban waa biraawsar ama aalad moobil ah oo duubaya goobtaada. In kasta oo laga yaabo inaad riixday okay markii ugu horreysay ee la weydiiyo haddii kheyraadka uu kula socon karo, qalabka ayaa si isdaba joog ah u diiwaangelinaya jagadaada halkaas ka socota.
Maaddaama macaamiisha ay ka daalayaan asturnaanta loo adeegsanayo siyaabo aysan u maleynin, xayeysiinta iyo ikhtiyaarrada baareynta gaarka loo leeyahay ayaa aad iyo aad u sii caan baxaya. Xaqiiqdii, Mozilla ayaa hadda ku dhawaaqday in Firefox ay ku xoojisay qaabkeeda daalacashada gaarka ah xayiraya trackers-saddexaad. Tan waxaa laga yaabaa inay ka sii horreyso xeerarka dowladda - kuwaas oo doonaya inay ilaaliyaan macaamiisha iyo xogtooda si aad iyo aad u badan.
Natiijooyinka ka yimid Mustaqbalka Aragtida sidoo kale shaaca ka qaaday in:
Xaddidnaanta miisaaniyadda yihiin oo ay u badan tahay inay sii ahaanayaan arrinta ururada hormuudka u ah macaamiisha iyo alaab-qeybiyeyaasha; laakiin tabashooyin kale oo kala duwan - laga bilaabo is dhexgalka xogta ilaa welwelka sharciyeynta - waxaa loo arkaa inay ku dhow yihiin muhiimadda.
Qiyaastii lix ka mid ah tobankii macmiil iyo alaab-qeybiyeyaal ayaa sheegaya inay sameynayaan cilmi baaris iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada moobiilka iyo / ama daalacashada mobilada laba sano ka dib - iyada oo alaab-qeybiyeyaashu ay u badan tahay inay yiraahdaan horay ayey u sameynayaan.
Xawaaraha jiilka aragtida si saameyn ugu yeesho go'aamada ganacsiga ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay farqi muhiim u ah warshadaha maanta, oo kaalinta labaad ka galay macaamiisha (17%) iyo saddexaad ee alaab-qeybiyeyaasha (15%).
Qiyaastii seddex meelood meel dadka qaata waxay yiraahdeen macnahooda ugu muhiimsan ee aruurinta xogta laba sano kadib waxay noqon doontaa xog uruurin dadban inkasta oo saddex meelood labo meel aysan runti maanta samaynaynin. Seddex meelood laba meel shirkadaha cilmi baarista suuqyada ayaan fileynin inay sameynayaan xog uruurin dadban muddo labo sano gudahood ah.
Ururinta Xogta Dadban: Wanaag mise Shar?
Si ay suuqyadu u joojiyaan carqaladeynta oo ay u bilaabaan wadaagga khuseeya, xitaa codsashada, dalabyada la siinayo macaamiisha, suuqleyda waa inay soo qabtaan xogta. Xogta waa inay ahaato mid si aan caadi aheyn u saxan oo la heli karo waqtiga-dhabta ah. Xaqiijinta waxaa lagu bixiyaa iyadoo la xaqiijinayo xogta laga helay ilo dhowr ah. Waqtiga-dhabta ah kuma dhici doono sahanno ama dhinac saddexaad… waa inay ku dhacdo si isku mid ah hab dhaqanka macaamiisha.
Waxaa laga yaabaa in suuqleyyaashu ay tan keeneen naftooda - ururinta terabytes-ka xogta macaamiisha, laakiin waligood ha u isticmaalin inay si caqli-gal ah ugu bixiyaan khibrad adeegsade wanaagsan. Macaamiisha way ka dheregsan yihiin, kaliya waxay dareemayaan adeegsi iyo xadgudub sida xogtooda loo iibsado, loo iibiyo loona wadaago inta u dhexeysa tan ilaha ah ee been abuurka ah.
Cabsida aan qabo ayaa ah, iyada oo aan la helin xog uruurin dadban, darbiyada ayaa bilaabaya inay kor u baxaan. Ganacsiyadu ma rabi doonaan inay soo saaraan waxyaabaha, qalabka iyo barnaamijyada bilaashka ah si kor loogu qaado waayo-aragnimada macaamiisha maxaa yeelay kama xaroon karaan xog kasta oo la isticmaali karo. Runtii ma waxaan dooneynaa inaan u jiheysano dhankaas? Ma hubo inaan sameyno… laakiin weli ma eedeyn karo iska caabinta.
Tags: gfkIIRMachadka Cilmi-baarista Caalamiga ahcilmi baarisxogta dadbanururinta xogta dadbancabbiraad dadbansahan
Istaraatiijiyadaada B2B waa inay ku jirtaa ganacsiga
Macaamiisha ayaa doorbidaya Xulashada iyo Isdhexgalka… xitaa Video